भारतमा विश्व चकित हुने नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछाने प्रर्दशन : ३ ओभरमा तीन विकेट ! « The News Nepal
भारतमा विश्व चकित हुने नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछाने प्रर्दशन : ३ ओभरमा तीन विकेट !
काठमाडौं । दिल्ली क्यापिटलका तर्फबाट किङ्ग्स इलाभेन पञ्जाबविरुद्ध खेलमा स्पीनर सन्दीप लामिछानेले विश्व चकित गराउने प्रर्दशन गरेका छन् । शनिबारको खेलमा नेपाली लेग स्पीनर सन्दीपले ३ ओभरमा नै ३ विकेट लिएर सबैलाई चकित बनाएका छन् । इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको दिल्ली क्यापिटल र किंग्स इलाभेन पञ्जबीचको खेलमा सन्दीप चम्किएका हुन्।
सन्दीपले तीन ओभर बलिङ गर्दा तीन विकेट लिएका हुन्। व्यक्तिगत पहिलो ओभरमा सन्दीपले केएल राउललाई १२ रनमा आउट गरे। सन्दीपका लागि दोस्रो ओभर भने महंगो सावित भयो। क्रिस गेललाई चार चौका दिए। व्यक्तिगत तेस्रो ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दीपले १२.२ ओभरमा गेललाई आउट गरे। गेल ३७ बलमा ६९ रन बनाएर आउट भएका हुन्।
१२.६ मै सन्दीपले एसएम कुरानलाई पहिलो बलमै आउट गरे। तीन ओभर बलिङ गर्दा सन्दीपले तीन विकेट लिएर ३३ रन मात्र दिएका छन्। दिल्लीले टस जितेर पञ्जाबलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । पञ्जाबले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १६३ रन बनाएको छ । जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको १ विकेटको क्षतिमा ७ ओभर खर्चिएर ६७ रन बनाइसकेको छ ।